Iindaba -Izinto ezininzi eziphambili ezichaphazela umgangatho weebhotile zewayini zeglasi
Zininzi izinto eziphambili ezichaphazela umgangatho weebhotile zewayini zeglasi
Zithini iindlela ezichonga iibhotile zewayini ezifanelekileyo? Umvelisi webhotile yewayini ye-Easypack uya kukuxelela malunga nezinto eziphambili ezichaphazela umgangatho weebhotile zewayini zeglasi: okokuqala ukuchonga umgangatho wangaphakathi webhotile yewayini yeglasi, ewe, kuvavanyo lokubandayo kunye novavanyo loxinzelelo lwangaphakathi luyafuneka. Lindela uthotho lweemvavanyo. Xa sifumana ibhotile yeglasi egudileyo kwaye eqaqambileyo, ngaphandle komehluko wombala, akukho msonto ubolileyo okanye ukuvulwa kokufrywa, kwaye emazantsi ebhotile ayifani ngobuninzi kwaye akukho ziphene zibonakalayo, inokubalwa njengeglasi efanelekileyo Ibhotile yewayini. Ukujonga ibhotile yeglasi ekukhanyeni okukhanyayo, kukho amaqamza amancinci ashinyeneyo emzimbeni webhotile. Isiphumo esithe ngqo sale meko kukuba uxinzelelo lwangaphakathi lwebhotile yewayini ayonelanga, ikakhulu ebangelwa kukungoneli kobushushu bedama lokunyibilika kunye nokunganyibiliki ngokwaneleyo kwento yeglasi engamanzi. Ewe, ngumba obaluleke kakhulu. Okwesibini: Ukuba umphezulu womngundo uhlanganiswe emva kwexesha elide lokusetyenziswa okanye kokuqhubeka kokusebenzisa ubangela ukungcola ukuba kuhambelane nomphezulu wokungunda, ibhotile yeglasi yewayini ayizukulingana. Nangona ingachaphazeli umgangatho wobume, ichaphazela kakhulu inkangeleko.
Iibhotile zeglasi kunye neenkonkxa zisetyenziswa kakhulu, kwaye iibhotile zeglasi kunye neenkonkxa kufuneka zisebenze kwaye zihlangabezane nemigangatho ethile esemgangathweni. Oku kulandelayo kukwazisa ngokufutshane kubavelisi bezicelo, ngethemba lokunceda uninzi lwabenzi bokuthenga:
①Umgangatho weglasi: usulungekile kwaye uyunifomu, ngaphandle kweziphene ezinjengesanti, imigca kunye namaqamza. Iglasi engenambala inokubonakala okuphezulu; umbala weglasi enemibala uyalingana kwaye uzinzile, kwaye unokufunxa amandla okukhanya wobude obuthile.
②Iipropathi zomzimba kunye neekhemikhali: Inozinzo oluthile lweekhemikhali kwaye ayihambelani nemixholo. Inqanaba elithile lokumelana nokuothuka kunye namandla oomatshini. Iyakwazi ukumelana neenkqubo zokufudumeza nokupholisa njengokuhlamba kunye nokucoca inzalo, kunye nokugcwala, ukugcinwa kunye nokuthuthwa. Inokuhlala ingonakaliswa xa uhlangabezana noxinzelelo lwangaphakathi nolwangaphandle, ukungcangcazela kunye nefuthe.
③Ndiyila umgangatho: gcina ubungakanani, ubunzima kunye nemilo, ubukhulu bodonga obufanayo, umlomo ogudileyo kunye nophantsi ukuqinisekisa ukuzaliswa okufanelekileyo kunye nokutywinwa okuhle. Akukho ziphene zifana nokugqwetha, umphezulu ongalinganiyo, ukungalingani kunye nokuqhekeka.
Abavelisi beebhotile zeglasi banokuvelisa ikakhulu kubandakanya ukulungiswa kwebhetshi, ukunyibilika, ukwenza, ukuthambisa, ukunyanga umphezulu kunye nokulungiswa, ukuhlolwa nokupakishwa.
①Amalungiselelo eBatch: kubandakanya ukugcinwa, ubunzima, ukuxubana kunye nokuhambisa izixhobo zebatch. Izinto ze-batch zifuneka ukuba zixutywe ngokufanayo kwaye zinobume beekhemikhali obuzinzileyo.
②Ukunyibilika: Ukunyibilika kweglasi yebhotile kuqhutywa ngokuqhubekayo kwitanki lomlilo (jonga iglasi yokunyibilikisa iziko). Imveliso yemihla ngemihla yeetile zetanki zedangatye ethe tye ngokubanzi idlula ngaphezulu kwama-200t, kwaye ubukhulu becala bufikelela kuma-400 ukuya kuma-500t. Imveliso yemihla ngemihla yeethoni yethangatye emise okwehhashe ubukhulu becala ingaphantsi kwama-200t. Ubushushu beglasi bunyibilika ukuya kuthi ga kwi-1580 ～ 1600 ℃. Ukusetyenziswa kwamandla kwe-akhawunti enyibilikayo malunga ne-70% yamandla onke asetyenziswayo kwimveliso. Inokonga ngokufanelekileyo amandla ngokufaka ngaphakathi itanki, yonyusa umthamo wezitena zokujonga kwindawo yokuhlaziya, ukuphucula ukuhanjiswa kweemfumba, ukwandisa ukusebenza komlilo kunye nokulawula ukuhanjiswa kolwelo lweglasi. Ukubhabha kwitanki yokunyibilika kunokuphucula ukuhanjiswa kolwelo lweglasi, komeleze ingcaciso kunye nenkqubo yokuhambelana, kunye nokwandisa imveliso. Ukusetyenziswa kokufudumeza ngombane kwilangatye lomlilo kunokunyusa imveliso kwaye kuphucule umgangatho ngaphandle kokonyusa isithando somlilo.
Sula iibhotile Pump Pump, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo, Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp,